कुन समयमा खाने गहुँको रोटी ? यो समयमा रोटी खाँदा हुन्छ फाइदाजनक…हेर्नुहोस् । जानकारीको लागि पूरा पढि सेयर गर्नुहोस् । – yuwa Awaj
कार्तिक २०, २०७७ बिहिबार 7
गहुँको रोटी प्राय: मानिसको दैनिक आहारमा पर्छ। तर यसलाई खाने केहि नियम पालना गर्यो भने यसमा रहेको सम्पूर्ण पौष्टिक तत्व हाम्रो शरीरलाई मिल्छ। वास्तवमा गहुँको रोटी बनाएको ८ देखि १२ घण्टासम्म खानु पर्छ। यो समय सम्म रोटीमा अधिक पौष्टिक तत्व हुन्छ।
जब गहुँको रोटी पकाइन्छ, यसको पौष्टिक क्षमता पकाएपछि ८ घण्टाको लागि भण्डारण गरेपछि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। गहुँको रोटी प्रायः सबै घरहरूमा खाइन्छ। गहुँको पिठोमा कार्बोहाइड्रेट प्रशस्त रूपमा पाइन्छ। यसका साथै यसमा प्रोटीन पनि भरपूर मात्रामा हुन्छ। पिठो नछानी रोटी बनाउदा त्यसमा फाइबर प्रशस्त मात्रामा हुन्छ किनभने गहुँको माथिल्लो तह प्राकृतिक र पौष्टिक फाइबरले बनेको हुन्छ।
जब प्रोटीन, फाइबर र कार्बोहाइड्रेटको मिश्रण एक निश्चित तापक्रममा तातो भएर एक निश्चित समयसम्म सेलाउन राखिन्छ, यस्तोमा पेट र आन्द्राका लागि राम्रो ब्याक्टेरिया उत्पादन हुन्छ। तिनीहरू पेटमा गएर पाचन प्रणाली र आन्द्रा स्वस्थ राख्नको लागि काम गर्छन्। यस्तो अवस्थामा बासी रोटी खाँदा पेट सम्बन्धि रोगहरू हटाउँछ।
कुन समयमा रोटी खानु उत्तम हुन्छ त ?
वजन घटाउनमा सबैभन्दा साधारण नियम रोटी जस्ता कार्बोहाइड्रेटले भरपूर खानेकुरा दिन को समयमा खानुपर्छ। यदि तपाईं खाजामा रोटी खानुहुन्छ वा बेलुका चार बजे सम्म खानुहुन्छ भने यसले तपाईंको रातिको कार्ब्सको सेवन कम गर्छ। यदि तपाईं कार्ब्सको सेवन कम गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले थोरै रोटी खानुपर्छ। रोटी साँझ चार बजे भन्दा पहिले नै खानुपर्छ।
जान्नुहाेस् किशमिशकाे पानी पिउनुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा: किशमिशका दानालाई पानीमा २० मिनेट जति सानो आगोमा उमालेर रातभर राखेर खानाले शरीरमा उत्पन्न हुने बिभिन्न समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । १. किशमिशको पानी केही दिन सम्म नियमित खानाले कब्जियत, एसिडिटी तथा थकान जस्ता समस्याबाट मुक्ति मिल्छ ।
२. किशमिश उमालेको पानी पिउनाले शरीरमा कोल’ेस्ट्रेरोलको मात्रा नियन्त्रण गर्नुका साथै शरीरमा ट्राइग्लिसेराइड्सको मात्रालाई कम गर्छ । ३. यसमा फ्लेबेनाइड्स एन्टी अक्सिडेन्ट भरपुर मात्रामा पाइन्छ जसले त्वचालाई सुरक्षित तथा चमकदार बनाउन मद्दत गर्छ ।
४. दिनप्रतिदिन यसको पानीको नियमित सेवनल गर्नाले पाच’न शक्ति बढाउँछ । ५. यसको सेवनले लिभरको समस्याबाट पनि मुक्ति मिल्नुका साथै शरीरमा मोटाबोल्ज्मिको स्तरलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ ।
Prevकिड्नी स्वस्थ राख्न कुन समयमा कति पानी पिउने ? हेर्नुहोस् !
Nextहाम्रै घर अगाडी रहेको यो झाडीको महत्वबारे कसैलाई थाहा छैन। यति धेरै रोगहरुको लागि फाइदाजनक हुन्छ…हेर्नुहोस् ।